आज कुकुर तिहार : अपराधी पत्ता लगाउने नेपाल प्रहरीका यी कुकुर , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज कुकुर तिहार : अपराधी पत्ता लगाउने नेपाल प्रहरीका यी कुकुर
काठमाडौं। कुनै पनि अपराध पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ । उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् प्रहरीका तालिमप्राप्त ककुरहरु । यी कुकुरहरु पूर्ण रुपमा प्रशिक्षित हुन्छन् र उनीहरुले घटनास्थलमा पाइने गन्धका आधारमा अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी टोलीलाई सघाउँछन् । प्रहरीका यी चौपाया सिपाहीहरु महाराजगन्जमा रहेको केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम स्कुलमा प्रशिक्षित हुन्छन्।
नेपाल प्रहरीले सुरुमा कुकुर प्रयोग गर्न थाल्दा यो स्कुल यहाँ थिएन । स्कुलकी प्रमुख एसपी डा. देउती गुरुङका अनुसारसुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कुकुर प्रशिक्षण स्कुल स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला ४ जना नेपाल प्रहरीका स्टाफहरु मलेसिया गएर कुकुरसम्बन्धी तालिम लिएर आएपछि यो शाखा हेडक्वाटरमा स्थापना भएको थियो । पछि २०४७ सालमा यो शाखालाई विस्तार गरी महाराजगञ्जमा स्कुल स्थापना गरियो।
अहिलेसम्म केन्द्रीय स्कुल महाराजगञ्जसहित ५ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरका कुकुर शाखाहरु स्थापना भइसकेका छन् । यही समयमा देश संघीय संरचनामा गएपछि २ वटा प्रदेशमा कुकुर शाखा भएनन् । केन्द्रीय स्कुलले यसको पनि चाँजोपाँजो मिलाउँदैछ । ‘२ नम्बर प्रदेशमा कुकुरसम्बन्धी तालिमप्राप्त प्रहरी कर्मचारी र कुकुरहरु यसै महिनाभित्र खटाउँछौं’ स्कुल प्रमुख डा. गुरुङले भनिन् ‘बाँकी रहेको ५ नम्बर प्रदेशमा पनि यो वर्षभित्र कुकुर शाखा स्थापना हुन्छ ।’
नेपाल प्रहरीका कुकुरसम्बन्धी सबै काम कारवाहीहरु यही स्कुलले हेर्छ । कुकुरलाई परिचालन गर्न कुकुरसम्बन्धी तालिम प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु चाहिन्छ । तालिमप्राप्त प्रहरीले मात्र कुकुरलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न र उनीहरुको संकेत सजिलै बुझ्न सक्छन् । यसरी कुकुर परिचालन गर्ने प्रहरी कर्मचारीको तालिम पनि यही केन्द्रमा हुन्छ । ती तालिमप्राप्त कर्मचारीको सरुवा बढ्वासम्बन्धी कामसमेत यहीँबाट हुन्छ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा ८० कुकुरहरु कार्यरत छन् । तीमध्ये आधाजति कुकुरहरु केन्द्रीय स्कुलमै छन् । बाँकी कुकुरहरु क्षेत्रीय शाखाहरुमा छन्। क्षेत्रीय शाखामध्ये पोखरामा सबैभन्दा धेरै कुकुर कार्यरत छन् । बाँकी शाखाहरुमा पनि समानुपातिक रुपमा कुकुरहरु परिचालित छन्। यी कुकुरहरु विभिन्न विषयगत तालिम प्राप्त छन् । उनीहरुलाई कहाँ कस्तो विषयमा तालिम पाएको कुकुर आवश्यक पर्छ त्यहीअनुसार परिचालन गरिएको छ।
हत्या चोरी जस्ता अपराधमा अपराधीले घटनास्थलमा छोडेका सुरागको गन्धको आधारमा अवराधी पत्ता लगाउने कुकुरलाई ट्रयाकर डग भनिन्छ । आम नागरिकले प्रहरीका कुकुर यिनै मात्र हुन् भनेर बुझ्छन् । तर, यो कुकुरले काम गर्ने एउटा विषय मात्र हो। ‘भिआइपीको कार्यक्रम स्थल, निवास, विमानस्थल लगायतका संवेदनशील स्थानमा हातहतियार वा विष्फोटक पदार्थ छ कि भनेर जाँच गर्ने अर्को किसिमका कुकुर छन्’ एसपी गुरुङले भनिन् ‘लागूऔषध भेट्टाउने कुकुरलाई छुट्टै किसिमको तालिम दिइएको छ ।’ लागूऔषधसम्बन्धी तालिम पाएका कुकुरहरु विमानस्थल, सीमानाका लगायतका स्थानमा बढी परिचालन हुन्छन्।
यसरी परिचालन गरिने कुकुरमध्ये सबैभन्दा बढी क्षमता भएका कुकुरहरु ट्रयाकरमा प्रयोग गरिन्छ । ‘ट्रयाकरको सुँघ्ने क्षमता अरुको भन्दा बढी हुनुपर्छ’ एसपी गुरुङ भसिन्छन् ‘उसको स्टामिना पनि बढी हुनुपर्छ र आक्रामक शैलीको हुनुपर्छ ।’ ट्रयाकर कुकुरले अरु कुकुरहरुले गर्ने काम गर्न सक्ने तर अन्य कुकुरले ट्रयाकरको काम गर्न कठिन हुने गुरुङ बताउँछिन्।
गुरुङका अनुसारअहिले अपराध रकुकुर परिचालनको दर हेर्दा प्रहरीमा कुकुर रसोसम्बन्धी तालिम प्राप्त कर्मचारीको अभाव देखिन थालेको छ । ‘कुकुर परिचालन गर्नुपर्ने कामहरु बढिरहेका छन्’ गुरुङले भनिन् ‘यसरी लगातार काम गर्दा कुकुरको क्षमतामा पनि कमी हुने हुँदा अहिले कुकुर र जनशक्तिको अभाव महसुस हुन थालेको छ । उनका अनुसार एउटा काम पूरा गरेपछि कुकुरले निश्चित आराम पाएन भने उसको क्षमतामा कमी आउँछ।
गुरुङका अनुसार मानिसको नाकमा सुँघ्ने ५ मिलियन कोषिका हुन्छन् तर कुकुरको २ सय भन्दा बढी हुन्छ । त्यसमा पनि प्रहरीले २५० भन्दा बढी कोषिका हुने जातीका कुकुरहरु मात्र अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गर्छ । नेपालमा पाइने स्थानीय जात तथा भोटे कुकुरको कोषिकाहरु कम हुने भएकोले अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गरिँदैन।
अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले २५० कोषिका हुने जातीका कुकुरप्रयोग गरिरहेकोमा हालै ब्लडहाउन जातको कुकुर ल्याइएको छ । यो जातको कुकुरको नाकमा ३ सय कोषिका हुने भएकोले यो कुकुरको सुँघ्ने क्षमता अरुको भन्दा बढी हुन्छ। यसले घटना भएको ९६ घण्टा पछि पनि गन्ध सुँघ्न सक्ने गुरुङ बताउँछिन् । यो कुकुर ल्याएसँगै विश्वभरीमा अपराध अनुसन्धानमा ८ प्रजातीका कुकुर प्रयोग गरिनेमा नेपाल प्रहरीसँग पनि सबै आठवटै प्रजातिका कुकुर भएका छन्।